आफैँले परीक्षा दुई महिनाको लागि तयारी कसरी गर्ने?
कसरी दुई महिनाको लागि तयारी गर्नुहोस्
यसलाई आफैलाई जाँदै हुनुहुन्छ? यहाँ कहाँ सुरू हुन्छ।
यदि तपाईं SAT वा GRE (वा अन्य) जस्तै मान्य परीक्षण लिइरहनुभएको छ र आफैलाई अघि बढाउने योजना बनाइन्छ भने, तपाईं जस्तै परीक्षणको लागि तयारी गर्न महिनाहरू, हप्ता वा दिन चाहिन्छ। अब केहि मान्छे यो जस्तै केहि समय अगाडी केहि मिनेटहरु cramming गरेर यस परीक्षण को लागि तयार गर्ने कोशिश गर्नेछन्, तर एक राम्रो परीक्षण स्कोर उनको भविष्य मा छैन! तपाईंको मामलामा, तपाईंले आफैलाई दुई महिना दिनुभएको छ, जुन तपाईले लिनु भएको परीक्षा जस्तै परीक्षाको लागि तयारी गर्ने समय हो।
यहाँ अध्ययन तालिका हो।
महिना 1 एसएटी को लागि तैयारी
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो परीक्षाको लागि दर्ता गर्नुभएको छ!
तपाइँको विशिष्ट परीक्षणको लागि परीक्षण प्रिप बुक किन्नुहोस्।
परीक्षण प्रेक्ट पुस्तकहरूसँग अध्ययन गर्न के गर्छ र don'ts समीक्षा गर्नुहोस्। मलाई यो भरोसा गर्नुहोस्।
परीक्षण आधारभूत समीक्षाहरूको समीक्षा: सामग्री, लम्बाइ, मूल्य, परीक्षण मितिहरू, दर्ता तथ्याङ्क, परीक्षण रणनीतिहरू, आदि।
आधारभूत स्कोर प्राप्त गर्नुहोस्। किताब भित्र भित्र पूर्ण-लम्बाइ अभ्यास परीक्षणहरू मध्ये एक लिनुहोस् कि तपाईले आजको परीक्षण लिनुभयो भने तपाईले कस्तो स्कोर पाउनुभयो। त्यस अंकको नोट बनाउनुहोस्।
तपाईंको समयलाई एक समय व्यवस्थापन चार्टको साथमा हेर्नुहोस् जहाँ परीक्षा पूर्वमा फिट हुन सक्दछ। परीक्षा पूर्वपुन समायोजन गर्न आवश्यक भएमा तपाईंको तालिका पुन: प्रबन्ध गर्नुहोस्।
आधारभूत स्कोर द्वारा प्रदर्शन गरी तपाईको कमजोर विषय (# 1) सँग coursework शुरू गर्नुहोस्।
# 1 पूर्णतयाका घटकहरू सिक्नुहोस्: प्रश्नहरूको प्रश्नहरू सोधिएको, समयको आवश्यक रकम, कौशल आवश्यक, प्रकारका प्रश्नहरू समाधान गर्ने तरिकाहरू, ज्ञान परीक्षण।
जवाफ # 1 अभ्यास प्रश्नहरू, प्रत्येक पछि जवाफहरू समीक्षा गर्दै। पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाई गल्तीहरू गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो तरिकाहरू सच्याउनुहोस्। यो खण्डको शिक्षा सामग्री राख्नुहोस्।
बेसलाइन स्कोरबाट सुधारको स्तर निर्धारण गर्न # 1 मा एक अभ्यास परीक्षण लिनुहोस्।
ठीक ट्युन # 1 प्रश्नहरूको जवाफ दिएका लागि तपाईं कस्तो छुट्याउने ज्ञान निर्धारण गर्न छुटेको छ। तपाईंले थाहा नभएसम्म पुन: पत्ता लगाउनुहोस्!
अर्को कमजोरतम विषय (# 2) मा सार्नुहोस्। #2को घटक पूर्ण रूपमा सिक्नुहोस्: प्रश्नहरूको प्रकारहरू सोधिएको, समयको आवश्यक रकम, कौशल आवश्यक पर्ने, प्रकारका प्रश्नहरू समाधान गर्ने तरिकाहरू, आदि।
जवाफ #2अभ्यास अभ्यासहरू, प्रत्येक पछि जवाफहरू समीक्षा गर्दै। पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाई गल्तीहरू गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो तरिकाहरू सच्याउनुहोस्।
बेसलाइनबाट सुधारको स्तर निर्धारण गर्न #2मा एक अभ्यास परीक्षण लिनुहोस्
राम्रो ट्युन #2प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छनौट गर्न छुटेको छ कि तपाईं कुन स्तरको ज्ञान हराउनुभएको छ। त्यस सामग्रीको समीक्षा गर्नुहोस्।
बलियो विषय / s (# 3) मा सार्नुहोस्। #3पूर्णतया (3 र5र5को घटकहरू जान्नुहोस् यदि तपाइँसँग परीक्षणमा तीन सेकेन्ड भन्दा बढी छ), सोधिएको प्रश्नहरूको प्रकार, समयको आवश्यक रकम, आवश्यक पर्दछ, प्रकारका प्रश्नहरू समाधान गर्ने तरिकाहरू, आदि।)
उत्तर अभ्यास अभ्यास #3(4 र 5) मा।
आधारभूत सुधारको स्तर निर्धारण गर्न #3(4 र 5) मा एक अभ्यास परीक्षण लिनुहोस्
ठीक दाँत #3(4 र 5) प्रश्नहरूमा जाँदा तपाईं कस्तो छुट्याउने ज्ञान निर्धारण गर्न मिल्दैन। त्यस सामग्रीको समीक्षा गर्नुहोस्।
SAT को लागि महिना2तयारी
समय सीमा, डेस्क, सीमित ब्रेक, आदि सहित परीक्षण वातावरण को अनुकरण गर्न पूर्ण-लम्बाइ अभ्यास परीक्षण लिनुहोस्।
तपाईको गलत परीक्षणको व्याख्याको साथ प्रत्येक अभ्यासको जवाफ दिनुहोस्। तपाईलाई छुटेको छ पत्ता लगाउनुहोस् र तपाईलाई सुधार गर्न के गर्न आवश्यक छ। खण्डहरूमा जानुहोस् जहाँ तपाईं सबै भन्दा कम छुट्यो।
अर्को पूर्ण-लम्बाई अभ्यास परीक्षण लिनुहोस्, परीक्षण वातावरण फेरि अनुकरण गर्दछ। फेरि, हरेक मिस्ड समस्या मार्फत जानुहोस्, कमजोरीहरु खोज्दै। पुस्तकमा फर्कनुहोस् र तपाइँ आफैले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्। अझै थप मद्दत चाहिन्छ? एक ट्यूटर फेला पार्नुहोस् जसले तपाईंको साथमा अन्तिम मिनेटको सत्रमा भेट्न सक्छ।
सबै भन्दा कमजोर सेक्सन (# 1) मार्फत फर्केर जानुहोस् र समस्याहरूको माध्यमबाट फेरि काम गर्नुहोस्, परीक्षण रणनीतिहरू याद गर्दै, अभ्यास समस्याहरूको पुनरावलोकन गर्ने, र यो समय मार्फत तपाईले काम गर्ने काम गर्दछ।
यदि तपाइँ अझै पनि सामग्री माहिर छैन भने एक शिक्षकको साथ समीक्षा गर्नुहोस्।
दिमाग खाना खाओ।
धेरै सुत्न पाउनुहोस्
तपाईंको परीक्षण-अधिक दक्षता लिनको लागि परीक्षण सुझावहरूको समीक्षा गर्नुहोस्।
आराम गर्न मद्दत गर्नको लागि केही मजाको शाम पनि योजना गर्नुहोस्
परीक्षा दुई दिन अघि, परीक्षाको लागि परीक्षण रणनीतिहरू पढ्नुहोस्, परीक्षण निर्देशनहरूको रूपमा किताब वा अनलाइनमा छापिएको छ।
तपाईंको परीक्षणलाई रातको रातलाई पैक गर्नुहोस्: एक अनुमोदित क्यालेन्डरले तपाईंलाई अनुमति दिईएको छ भने, #2प्यानलहरू नरम रैजर, दर्ता टिकट, फोटो आईडी , घडी, नाक वा पेटीको लागि पेय।
आराम गर्नुहोस्। तपाईंले गर्नुभयो! तपाईंले सफलतापूर्वक तपाईंको परीक्षणको लागि अध्ययन गर्नुभयो, र तपाई तयार हुनुहुन्छ। त्यसो त गहिरो सास लिनुहोस्, ठीक छ?
5 कुरा टेस्टको दिन गर्न
टेस्ट पहिले रात कसरी अध्ययन गर्ने
चार प्रकारको प्रसङ्ग सुराग
कसरी लागू गरिएको मुख्य विचार पत्ता लगाउनुहोस्
अडिट लर्निंग लक्षण र रणनीतिहरू
तपाईंको बच्चालाई कसरी अध्याय परीक्षणको लागि तयारी गर्दा त्यहाँ कुनै अध्ययन गाइड छैन
Vocab अभ्यास 2: हार
कसरी मुख्य विचार पत्ता लगाउनुहोस्
अमेरिकी गृहयुद्ध: मेजर जनरल अलेक्जेंडर हेस
ठूलो कला सिर्जना गर्न आधारभूत नियम र सिद्धान्तहरू पछ्याउनुहोस्
गोल्फमा एक कन्डक्टरलाई अंक बुझायो
VEGA उपनाम अर्थ र उत्पत्ति
महासागर एसिड भनेको के हो?
बुझ्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मिति रेखा कसरी काम गर्दछ
पार्क मा नंगे बत्ती
पोप जुलियस द्वितीय
रातोपहरमा गार्जियन एन्जिल सन्देशहरू कसरी व्याख्या गर्ने
आइंस्टीनले आफ्नो थ्योरी रिटरेटिटीलाई प्रस्ताव गर्छ
क्युबा क्रांतिमा प्रमुख खेलाडीहरू
ओउजा बोर्ड कति सुरक्षित छ?
1812 को युद्ध: कप्तान थोमस म्याकडोना
बुलबुला इंद्रधनुष विज्ञान परियोजना
प्रिय श्री हन्साव बेवर्ली क्लेरी द्वारा
ढिलो वर्षमा ढिलो हुनुहुन्छ?
अंडरटेकर-के के वास्तविक र कस्तो शहरी कथा?
बुध मा कनगो - बुध चिन्ह
2014 को शीर्ष 10 सबै भन्दा प्रतिज्ञाजनक नयाँ पप कलाकार
स्पेनिश बेबी नाम
निराश रंग प्रयोग
Word 2007 सँग VBA म्याक्रो कोडिङ जान्नुहोस्
अमेरिकी प्रकट भाग्य
बिन्यामीन ब्रेक गर्ने प्रोफाइल
सिक्नुहोस् किन चीनमा हान राजवंश
उहाँलाई तपाईंको लागि पतन गर्नुहोस्: प्रेमको लागि उहाँलाई उद्धरण